Nke bụ eziokwu bụ na ndị ahịa m agaraghị n'ọfịs na, ka m na-agbada ndepụta ndị ahịa m ma mụbaa nke ọ bụla, m nọ na-arịwanye elu ma ụlọ ọrụ m nọ ọdụ efu oge. Nke ahụ bụ ihe dị oke ọnụ space ụlọ ọrụ dị oke ọnụ karịa ego.
Ọ bụ ezie na ndị ahịa m na-ejikwa netwọkụ dị mma emechi nke ọha na eze, nke ahụ abụghị otu ihe na saịtị ndị na-arụ ọrụ na ụlọ ahịa kọfị. Eziokwu bụ na ọtụtụ n'ime netwọkụ ndị ahụ na-emeghere emeghe ka snooping. Site na nzere na ihe ọgụgụ isi m na-arụ ọrụ kwa ụbọchị, enweghị m ike itinye ndụ m na nkwukọrịta na-emeghe ọhaneze. Nke ahụ bụ ebe Izu nzuzo n'onwe Ntanetị abata n’egwuregwu.
Maka nkọwa zuru ezu banyere ihe VPN bụ, ị nwekwara ike ịchọ ịlele ihe mmekọrịta mmekọrịta nke Surfshark, Kedu ihe bụ VPN?
Zoo IP gị na ebe gị - Jiri VPN zoo adreesị IP gị na ọnọdụ gị site na saịtị na ebe ndị na-agba ọsọ.
Ọnọdụ Geographic - Mgbe inwetara na usingntanetị n'iji VPN, ngwugwu data niile na-abịa site na ihe nkesa dị na kọmputa gị ma ọ bụ ngwaọrụ mkpanaka ga-agabiga na sava nke onye na-eweta gị VPN. Maka ịrụ ọrụ kachasị, họpụta VPN maka PC yana sava gburugburu ụwa. N'ezie, nkwa VPN banyere iru zuru ụwa ọnụ anaghị ekwe nkwa arụmọrụ dị mma, mana ọ bụ ihe ịrịba ama dị mkpa na akụrụngwa onye na-eweta ọrụ dị elu ma nwee ike ịnye ọrụ dị elu.
Tags: ExpressVPNsurfsharkỌwaranetwọk nkeonwe nzuzoOkweyiheihe bụ vpn